Ọzara na ndịda ọwụwa anyanwụ California na-adị ndụ mgbe afọ ise nke ụkọ mmiri gasịrị | Network Meteorology
Foto: Ọzara Ndịda Ọwụwa Anyanwụ California na-adị ndụ mgbe afọ ise nke ụkọ mmiri ozuzo gasịrị
Foto - Anza Borrego Desert State
Ọbụnadị ọzara kachasị njọ nwere ike inye ihe ịtụnanya kachasị ịtụnanya. Ma ọ bụ na, mgbe oké ifufe ahụ gasịrị, udo na-alaghachi mgbe niile ma ọ bụ, kama, ndụ. Otu ihe atụ maka nke a bụ ọzara nke ndịda ọwụwa anyanwụ California. N'ebe ahụ, mgbe afọ ise nke ụkọ mmiri ozuzo gasịrị, mmiri ozuzo nke oge gara aga a mere ka okooko osisi weghara odida obodo.
Ma, ọ bụkwa na ha mere ya na a ikpọ ụzọ. Dị ka ọ na-adị, a na-enwekarị osisi na-agba ume ifuru ọ bụrụgodị na ọnọdụ ndị ahụ adịchaghị mma; Otú ọ dị, na nke ugbu a, ọtụtụ puku na puku okooko osisi na-enwu gbaa n'ọzara nke ala ndịda ọwụwa anyanwụ.
Foto - Kyle magnuson
Mkpụrụ dị n'ọzara na-ekpo ọkụ chọrọ okpomọkụ, ala aja aja, na obere mmiri ka ha gbaa. Agbanyeghị, n ’ebe ndị a ị gaghị amata mgbe mmiri ga-ezonwu ga-ezuru ahịhịa ọzọ. Ma ndi okike eweputala uzo ime mgbanwe: ozugbo ifuru ifuru, ẹmbrayo nwere ike na-ehi ụra ruo ogologo oge, dịka shei na-echebe ya na-esikarị ike.
N’ezie, ozugbo mkpụrụ nke mbụ na-ada, mkpụrụ ndị ahụ egbula oge itụpụta iji mee ka mmiri mmiri dị oke ọnụ ahịa ga-enyere ha aka mejupụta usoro ndụ ha, nke bụ ihe mere na California.
Mmiri ozuzo nke ọzara Anza Borrego, na ndịda ọwụwa anyanwụ California, site na 1985 ruo 2017. Image - NOAA
Mmiri ozuzo dị ntakịrị n'oge ndị a, mana n'oge oyi 2016/2017 dara ihe karịrị okpukpu abụọ nke ihe na-ada ada. Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto dị n'elu, na Anza Borrego desert nkezi oyi ọdịda mmiri adịkarịghị 36ml, mana nke ikpeazụ mebiri ihe ndekọ nke oge ndị a wee mechie, opekata mpe nwa oge, ụkọ mmiri ozuzo.
Foto ndị ahụ mara ezigbo mma, ị naghị eche?
Foto - Anza Borrego Anụ ọhịa Na-eduzi Facebook
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Foto: Ọzara Ndịda Ọwụwa Anyanwụ California na-adị ndụ mgbe afọ ise nke ụkọ mmiri ozuzo gasịrị
Enwere ike ịzọpụta Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ pụọ na nkwụsị?